ဒီနေ့ခေတ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက ဘာကြောင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလိုအပ်ရသလဲ? : DigitalDots
ဒီနေ့ခေတ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက ဘာကြောင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလိုအပ်ရသလဲ?
ဒီနေ့ခေတ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက ဘာကြောင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလိုအပ်ရသလဲ။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမှာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ ဂယက်လှိုင်းရိုက်ခတ်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ထွန်းကားလာခြင်းက အခြေချနေထ်ိုင်မှုနဲ့ အတူ ကြီးမားတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့တကွ တိုင်းနိုင်ငံတွေ ပေါ်ပေါက်လာစေခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် စက်မှုတော်လှန်ရေး ပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက် လူနေထူထပ်တဲ့ မြို့ကြီးပြကြီးတွေ ဖြစ်လာစေပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းလည်း မြင့်မားလာတယ်။ နောက်ဆုံးလက်ရှိ သတင်းအချက်အလက်ခေတ်မှာတော့ ကူးလူးဆက်ဆံမှုတွေပိုများလာပြီး ကမ္ဘာကြီးဟာ ရွာကြီးတစ်ရွာလို ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကို သမိုင်းပညာရှင်တစ်ချို့က နည်းပညာရဲ့ လှိုင်းလုံးကြီး သုံးခုအဖြစ် တင်စားခဲ့ကြ ပါတယ်။
ဒီနည်းပညာ လှိုင်းလုံးကြီးတွေက တစ်ခုထက်တစ်ခု ဂယက်ရိုက်ခတ်မှု ပိုကြီးလာပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု ကလည်း သူ့ထက်ကဲဆပွားတိုးတက်ကာ မြန်ဆန်ကြီးထွားလာတယ်။ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက် နဲ့ မိုဘိုင်း နည်းပညာတွေ ထွန်းကားလာတဲ့ လက်ရှိ သတင်းအချက်အလက်ခေတ်မှာတော့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံ တွေအထိ ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကို နှောင့်နှေးမှုမရှိ ခံစားလာရတယ်။ တကယ်တမ်းမှာ ဒီနည်းပညာကိုယ်တိုင်က အဲဒီဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံတွေကို ဆင်းရဲတွင်းက ကယ်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင် နိုင်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာ ဒီ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ဆက်သွယ်ရေး အိုင်စီတီ နည်းပညာ အပေါ် အခြေပြုထားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ထွန်းကားသလို အခြားသမား သမားရိုးကျ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေ ကလည်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ပုံရိပ်မြင်သာထင်ပေါ်မှုရှိရေးနဲ့ ဖောက်သည်နဲ့ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ အိုင်စီတီ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အမှီပြုနေရပါတယ်။
စက်မှုတော်လှန်ရေး နဲ့ မတူတာက အိုင်စီတီဝန်ဆောင်မှု ရယူသုံးစွဲမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ဟာ နှိုင်းယှဉ်ချက် အားဖြင့် စက်မှုကုန်ထုတ်အရင်းအနှီးတွေလောက် ကြီးမားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်း သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာရဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို ခံစားသုံးစွဲဖို့ရာ လွယ်ကူလာတယ်။ အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက် နဲ့ မိုဘိုင်း နည်းပညာတွေရဲ့ အထောက်အကူ ကို ရယူသုံးစွဲမှုဟာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေနည်းတူ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေက လုပ်ငန်းတွေ အတွက်လည်း အရေးပါပြီး ပိုလို့တောင် လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုနိုင် လောက် ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်ရဲ့ အိုင်စီတီနည်းပညာအသုံးချမှုမှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ အတွက် အခြေခံအကျဆုံး နဲ့ အကျိုးရလဒ်သိသာထင်ရှားမှု အရှိဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ အင်တာနက် အပေါ် ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခု ထောင်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းပုံရိပ် နှင့် ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ
အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ မရှိမဖြစ်အင်္ဂါရပ်တွေထဲမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ပုံရိပ်နဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားမှု ပါဝင်တယ်။ ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ ခွဲခြားနိုင်မှုလည်းရှိရပါမယ်။ ယခင်ခေတ်တွေမှာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ပုံရိပ်၊ ဆောင်ပုဒ်၊ မစ်ရှင်ဖော်ပြချက် တွေကို စာနယ်ဇင်း၊ရုပ်သံ၊ရေဒီယို နဲ့ ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ် တွေလို ကြားခံနည်းလမ်း မီဒီယမ်တွေက တစ်ဆင့် ဖြန့်ချိကြတယ်။ အင်တာနက်အပေါ်က ကုမ္ပဏီ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဆိုတာ ကလည်း ကိုယ့်လုပ်ငန်းပုံရိပ် နဲ့ ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်လက္ခဏာရပ်ကို အများသိအောင် ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ သုံးရတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ကြားခံနည်းလမ်းတစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ဖို့ ကုမ္ပဏီလိပ်စာ နဲ့ ဧည့်သည်ကို လက်ခံဆွေးနွေးလုပ်ကိုင်ရာ အဆောက်အအုံ ရဲ့ ဥပဓိတွေက အရေးပါသလို အင်တာနက်အပေါ် မှာ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိနေဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ လိပ်စာ အတည် တကျမရှိ၊ ရုံးချုပ်အဆောက်အအုံ ဥပဓိမကောင်းတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ယုံကြည်ရဖို့ရာ ခက်ခဲတယ်။ ထို့အတူပဲ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကုမ္ပဏီအကြောင်းဖော်ပြချက် ဝက်ဘ်ဆိုက်မရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ယုံကြည်ရခက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပေါ်ထွန်းစ လုပ်ငန်းငယ်လေးတွေက ဖောက်သည်တွေနဲ့ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ကိုယ့်အကြောင်းကိုရှင်းပြနိုင်ဖို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်က ကုန်ကျစရိတ်နည်းပြီး ထိရောက်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ဆက်သွယ် လိုသူတွေက ကိုယ့်အကြောင်းကို ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ အလွယ်တကူ စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဆိုတာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာကတ် နဲ့ ပုံရိပ်အသွင်အပြင် တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီမှာ လိပ်စာကတ် မရှိရင် ဘယ်သူမှ ယုံမှာ မဟုတ်သလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ တူတူတန်တန် ဝက်ဘ်ဆိုက်မရှိဘူးဆိုရင် ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်တဲ့ သူတွေအနနဲ့ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ ပုံပန်းသွင်ပြင်ကို ကြည့်ပြီး ကုမ္ပဏီကို အကဲဖြတ်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်း ဖြစ်လာဖို့ လုပ်ငန်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု ရှိကို ရှိရမယ့်အပြင် အဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်က သားနားကြည့်ကောင်းဖို့လည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်။
ပုံရိပ်ကောင်းတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုက လာရောက် လည်ပတ်သူတွေကို လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ သတိပြုမိလာစေဖို့နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အထင်အမြင်ကို စွဲမြဲသွားစေဖို့ရာ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုက လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ အပိုင်းတစ်ပိုင်းမျှသာ ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီကစလို့ နောက်တစ်ဆင့်တိုးပြီး ကိုယ့်လုပ်ငန်း ထုတ်ကုန် နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေအကြောင်း အသေးစိတ်အချက်တွေကိုဖော်ပြပေးနိုင်တယ်။ အမွှမ်းတင်ပုံဖော် တင်ဆက် ပြသပေးထားနိုင်ပါသေးတယ်။ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက် မီဒီယာဟာ စာနယ်ဇင်း၊ မာလ်တီမီဒီယာ နဲ့ တုံ့ပြန်ဆက်သွယ်မှုရှိတဲ့ မီဒီယာ သဘောတွေ အားလုံး ပေါင်းစပ် ထားတာနဲ့တူတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ မီဒီယာ တစ်ခုချင်းစီက အားသာချက်တွေ အားလုံးရရှိထားတယ်။ ဥပမာ စာသားနဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေ နဲ့တင်ပြမှုဟာ တိကျတဲ့ အချက်အလက်တွေကို လိုသလို အချိန်ယူပြီး ကြည့်ရှု နိုင်စေတယ်။ အရုပ်အသံ မာလ်တီမီဒီယာက ပိုပြီး ထဲထဲ ဝင်ဝင် ပေါ်လွင်အောင် တင်ဆက်ပေးနိုင်တယ်။ အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်ဆက်သွယ်မှုရှိတဲ့ မီဒီယာက ထုတ်ကုန်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှု အကြောင်း ပိုပြီး နားလည် သဘော ပေါက်လာစေပါတယ်။ အင်တာနက် သဘောအရ အချိန် နဲ့ နေရာ အကန့်အသတ်ဘောင်ကိုလည်း ကျော်လွန်နိုင်တယ်။ ဆိုလိုတာက အင်တာနက် ရယူသုံးစွဲနိုင်သူတိုင်း ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး အနှံ့ဖြန့်ကျက်ပြီး လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် အဆင်ပြေစေပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆက်စပ်လွှမ်းခြုံမှုသဘောတရား အရလည်း သတင်း အချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုကို ၂၄ နာရီ ၇ ရက် ပတ်လုံး ပေးကမ်းထားနိုင်မှုက အရေးကြီးပြီး ဖောက်သည် ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ရှိသူတွေကို ပိုပြီးကျယ်ပြန့်စွာ ဆွဲဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေနဲ့တောင် ဆက်သွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကမိတ်ဆက်ပြီး ဆက်သွယ် ရှင်းပြညှိနှိုင်းတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး လုပ်ငန်းကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ဖို့ ဆိုရင် အွန်လိုင်းဖောင် နဲ့ အမှာစာတင်တာတွေကစလို့ အလုပ်လျှောက်လွှာလက်ခံတာတွေအထိ ဝက်ဘ်ဆိုက် အတွင်းမှာတင် လည်ပတ်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အီလက်ထရောနစ်ကူး သန်းရောင်း ဝယ်ရေး လို လုပ်ငန်းမျိုးမှာဆိုရင် ရှာဖွေကြည့်ရှုခြင်းကနေ မှာယူခြင်း နဲ့ ငွေပေးချေခြင်းအထိ ဝက်ဘ်ဆိုက် အတွင်းမှာပဲ အပြီးအစီးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် အင်တာနက်အပေါ် ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိနေတဲ့အခါ ဖောက်သည်နဲ့ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်း ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိသူတွေက Google နဲ့ အခြားနည်းလမ်းတွေ ကနေ အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်တယ်။ ကိုယ်နဲ့ ဆက်သွယ် လိုသူတွေဟာကိုယ့်လိပ်စာကို Google Map ကနေလည်းရှာဖွေနိုင်တယ်။ အခြားတနည်း လှည့်ပြော ရရင် ကိုယ့်ပြိုင်ဘက်တွေက အင်တာနက်အပေါ်မှာ ကိုယ်ပိုင် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ ရှိထားပြီး ကိုယ့်မှာ ရှိမထားရင် ကိုယ့်ကို ဆက်သွယ်မှုမရနိုင်ဘဲ ဖောက်သည်တွေ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်တာနက်အပေါ်မှာ ကိုယ်ပိုင် ဝက်ဘ်ဆိုက်နေရာတစ်ခု ရှိထားဖို့က မရှိမဖြစ်လိုအပ်သလို ကိုယ့်အမည်ကိုယ်ရဖို့ လက်ဦးမှုယူပြီး စောစောစီးစီး ရယူထားဖို့တောင်လိုအပ်တယ်။ ဒါကတော့ ရှေ့ဆက်ဖော်ပြမယ့် domain name ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
Domain Name နှင့်ပတ်သက်သော အကြာင်းအရာများ တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရူနိုင်ပါသည်။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ အွန်လိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက် အကူအညီလိုအပ်လာခဲ့ရင်တော့ ဤစာမျက်နှာမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Posted in Web development|0 Comments
Time to Go for Mobile
Domain Name နှင့်ပတ်သက်သော အကြာင်းအရာများ
© 2017 DigitalDots - Web design, Development & Marketing Solutions. All Rights Reserved.